नागरिक जीवनमा कानूनको महत्व : सुनिल प्रजापति — Bhaktapurpost.com
नागरिक जीवनमा कानूनको महत्व : सुनिल प्रजापति
सुनिल प्रजापति, प्रमुख भक्तपुर नगरपालिकाभक्तपुर, १० असाेज
भक्तपुर, १० असाेज
कानून सबै नागरिकको लागि उत्तिकै आवश्यक विषय हो । कानूनको महत्व र आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । कानूनको अर्थ विधायिकाले बनाएको ऐनलाई मात्रै सम्झिनु हुँदैन । विद्यार्थी कक्षा कोठामा बस्दा होस् या परीक्षामा सामेल हुँदा त्यहाँ प्रत्येक व्यक्तिलाई नियमले बाँधेको हुन्छ । नियम उल्लंघन गर्नासाथ कुनै पनि व्यक्ति दण्ड सजायको भागी हुन्छ ।
चिकित्साशास्त्र, मानविकी र राजनीति शास्त्र पढ्ने विद्यार्थीले गणित वा अन्य विषय नपढे पनि बिषय बस्तुको हिसाबले खास फरक नपर्ला किनभने एउटै बिषयमा गहिरिएर पढे बिशेषज्ञ बन्न सक्छ । तर कानून सबै विषय पढ्नेहरुको लागि उत्तिकै आवश्यक बिषय हो । कानूनी ज्ञानको अभावमा कैयौं डाक्टर, इञ्जिनियर, वैज्ञानिक, प्राध्यापकलगायत उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुले अदालतबाट सजाय पाएका छन् । संसदबाट पारित हुने वित्तिकै देशभरका सबै नागरिकले कानून थाहा पाएको मानिन्छ । मलाई थाहा छैन भनेर कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । त्यसैले भनिन्छ, ‘कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुने छैन’।
डाक्टर अशोकानन्द मिश्र उमेरले ७५ वर्ष कति सक्नुभयो । उहाँ राम्रो डाक्टर हुनुहुन्छ । ४०/४५ वर्ष अघि भक्तपुर अस्पतालको इन्चार्ज भएर पनि काम गर्नु भयो । २/३ वर्ष अघि राजविराज स्थित हामी उहा“को घरमा गयौं । उहा“ले हा“स्दै भन्नुभयो– ‘मैले पनि अधिवक्ताको लाइसेन्स पाइसके नि ! उहाँको कुरा सुनेर आश्चर्य मान्दै हामीले जिज्ञासा राख्यौ ‘यो उमेरमा तपाई वकिल ?’ उहाँले कानूनको महत्वबारे स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो– ‘म वकिल बन्न कानून पढेको होइन । यहाँ केही हुनासाथ डाक्टरलाई दुःख दिन्छन्, भए नभएका कुरा लगाएर प्रशासन, अदालतमा बोलाउन्छन् । आफूलाई प¥यो भने आफैले वहस गर्ने हिसावले आफ्नो पेशागत सुरक्षाको लागि पढेको हु“ ।’
उहाँको उक्त कुराबाट पनि सबै पेशा व्यवसाय गर्ने नागरिकको लागि कानून उतिकै महत्वपूर्ण हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अहिले प्रशासकहरु जस्तै सचिव, सहसचिव, उपसचिव, अधिकृतदेखि अधिका“शले अन्य विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि कानून विषय पनि अध्ययन गरेको हामी पाउ“छौं । यसबाट कानून विषयको महत्व कति छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
एक वर्ष अघि भनपामा काम गर्ने एक जना ठेक्केदारस“ग हाम्रो विवाद भयो । उनले समयमा गुणस्तरीय काम गरि दिएनन् । उनी विभिन्न वहानाबाजी गरेर थप पैसा असुल्ने दाउमा थिए । हामीले कानून बमोजिम हदैसम्मको जरिवाना ग¥यौं । अदालत जाने उनले धम्की पनि दिए । पछि उनी अदालत गएनन् । उनले अहिले पनि भक्तपुरमा काम गर्दैछन् । पहिलेको तुलनामा गुणस्तरीय र समयमा सिध्याउने हिसावले काम गर्दैछन् । यसर्थ गलत काम गर्नेहरूलाई दण्ड सजाय गरेर ठिक ठाउँमा ल्याउने माध्यम पनि कानून हो ।
अहिले नयाँ पुस्ताले राष्ट्रिय कानून मात्रै पढेर पनि पुग्दैन । अन्तराष्ट्रिय कानूनका पनि जानकार हुनुपर्छ । भारतले नेपालको ७१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी सीमा मिचेको छ । त्यो हाम्रो भूमि हामीले फिर्ता लिनुपर्छ । यो पनि कानूनसँग जोडिएको विषय हो । सीमाविद्हरू बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, रतन भण्डारीलगायतले सबै प्रमाणहरू विभिन्न ठाउँमा गएर अध्ययन गरेर संकलन गरी दिनुभयो । ती प्रमाणहरूको आधारमा मिचेको सबै जमिन फिर्ता लिन सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो । साथै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र पनि नेपालकै भएको प्रष्ट प्रमाणको आधारमा नेपाल सरकारले नक्सा पनि जारी ग¥यो । नक्सा जारी गरेर मात्र पुग्दैन अहिले पनि उपभोग भारतले नै गरिरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर फिर्ता लिन पहल नगरेसम्म त्यो जमिन फिर्ता हुँदैन । तर यसबारे सरकार उदासिन देखिन्छ । हाम्रो परराष्ट मन्त्रालयमा अन्तराष्ट्रिय कानूनका ज्ञाताहरु भएको भए सायद् त्यसको पहल भइसक्थ्यो ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार मा.वि. तहसम्मको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएपछि गत वर्षदेखि कानुनमा कक्षा ११ सुरु गरेका थियौ भने ११ र १२ संगै कानूनमा स्नातक पढाउनेतर्फ पनि हामीले जोड दिदैछाैं । सबै विद्यार्धी भाइबहिनीहरुले राम्रो वकिल बनेर देश र समाजको सेवा गर्न सकुन् हाम्रो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना ।
( कानुन विषय लिई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ‘कानुन विषयको अध्ययन र यसको महत्व’ विषयमा नगर प्रमुख प्रजापतिको मन्तव्य)